Su'aalaha la Weydiiyo - Linyi Yilibao Products House Co., Ltd.
1. Ma waxaad tahay soo saare ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay soo saaraha, warshaddeena waxay ku taalaa Linyi City, Gobolka Shandong, Shiinaha. Waxaanan soo saareynay alaabada guryaha in kabadan toban sano. Warshaddeenu waxay leedahay shahaado ISO9001.
2. Ma ii soo diri kartaa Muunad intaanan dalban?
Haddii aad u baahan tahay muunad si loo hubiyo tayada iyo waxyaabaha, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho muunad yar, waa qayb ka mid ah hal shey oo dhameystiran. Iyomuunad yar waa lacag la'aan, waxaad u baahan tahay oo keliya bixiso kharashka alaabta la keenayo.
3. Waa maxay Waqtiga dhalmada?
Waxay kuxirantahay tirada dalabkaaga. Hadday tiro yar tahay, badiyaa 7 maalmood gudahood kadib helitaanka lacag bixinta. Haddii tiro badan oo amar ah, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho waqtiga wax soo saarka.
4. Waa maxay muddada bixintaada?
T / T; Haddii tiro yar, 100% ay bixiso T / T. Haddii tiro aad u tiro badan, waxaad ku bixin kartaa 30% dhigaal ah T / T, 70% dheelitirka T / T ka dib dhammaynta wax soo saarka; Waxaad sidoo kale wax ku bixin kartaa iyadoo la raacayo habkaaga, fadlan nala soo xiriir si aan ula tashanno.
5. Maxay tahay dekedda rarkaagu?
Dekedda Qingdao, Shiinaha
6. Maxaan u doortaa alaabtaada?
waxaan nahay soosaarid, waxaan ku siin karnaa qiimaha warshadda taas wax cunidrka badan shirkadda ganacsiga. Waxaad si toos ah uga iibin kartaa alaab warshaddeenabilaa dheeliye, waxay kuu keydin doontaa lacag aad u badan. Iyo alaabteena shirkaddu waa kuwo tayo sare leh, iyagu waaiibinta kulul adduunka oo dhan.